भिडियो सहित Archives | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं । ‘मेरो डान्स कप’ र ‘मेरो भ्वाईस कप’ रियालिटी शोले बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ । जसमा गायक प्रमोद खरेल, अभिनेत्री केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्माको उपस्थिती रहेको थियो । अन्तराष्ट्रिय वेलफेयर फाउन्डेशन अमेरीकाद्वारा अमेरीकाको ओहायोमा आयोजना
१७ पुष २०७६, बिहीबार १६:४९	१७ पुष २०७६, बिहीबार १६:४९
काठमाडौं । सन् २०१९ मा प्रतिष्ठित भनिएकाहरुले नै पद र प्रतिष्ठा गुमाए । त्यस्तै केहि घटनाहरु मुलुकमा निकै चासोपूर्ण रुपमा हेरिए । केहि पदबाटै चिप्लिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुखदेखि सिद्धबाबासम्मले यसवर्ष धेरै चर्चा पाए । सभामुख रहेकै अवस्थामा महराले आफ्नै
१७ पुष २०७६, बिहीबार १४:४०	१७ पुष २०७६, बिहीबार १४:४०
काठमाडौं । “हजुर, जस्ता प्रश्नको पनि उत्तर सामान्य ढङ्गबाट दिनुहुन्छ, यहाँले जस्तो अथाह ज्ञान पाउन हामीले कसरी पढ्ने होला ?”, जेभियर्स इन्टरनेशनल स्कुलका छात्र प्रज्ञान बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा सामान्य लाग्ने गम्भीर प्रश्न राखे । प्रश्न खस्ने बित्तिकै
१७ पुष २०७६, बिहीबार ०७:४२	१७ पुष २०७६, बिहीबार ०७:४२
काठमाडौं । वर्ष २०१९ सकिएको छ । आजदेखि २०२० को शुरुवात पनि भइसकेको छ । गएको वर्ष भित्र केहि चलचित्रहरुले बक्स अफिसमा राम्रै पैसा छापे पनि प्राय चलचित्रहरु भने फ्लप लिस्टमा नै परे । तर चलचित्रहरुले पैसा कमाउन नसकेपनि दिन
१६ पुष २०७६, बुधबार १७:५२	१६ पुष २०७६, बुधबार १७:५२
काठमाडौं । सन् २०१९ हामीबाट विदा भएर २०२० को आगमन हुँदैछ । कुनै बेला २०१९ पनि यस्तै तामझामका साथ हामीमाझ आएको थियो, जसरी अहिले २०२० आउन लागेको छ । आएकाहरू जानैपर्ने नियमका कारण २०१९ मा नेपालका धेरै चर्चित कलाकारहरू धर्तीबाट
१४ पुष २०७६, सोमबार १३:५६	१४ पुष २०७६, सोमबार १३:५६
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता बहिर्गमन वैकल्पिक शक्ति निर्माणको दिशामा अनुकूलताको परिस्थिति भएको बताएका छन् । केन्द्रविन्दु अनलाईन टेलिभिजनसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा डा. भट्टराईले नेकपा पनि सर्वसत्तावादी बन्दै गएकाले आफूहरू सरकार छोडेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणका
१३ पुष २०७६, आईतवार १३:३८	१३ पुष २०७६, आईतवार १३:३८
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १९:२७	१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १९:२७
बाह्र बर्षपछि बिक्रमको टिलपिल टिलपिल तारा (भिडियो सहित)
काठमाडौं, बहुप्रतिभाशाली कलाकारको रुपमा आफूलाई कलाक्षेत्रमा परिचित गराउन सफल कलाकार, गायक बिक्रम शाह बाह्र वर्षपछि टिलपिल टिलपिल तारा लिएर आएका छन् । चलचित्र निर्माता समेत रहेका शाह गायनमा बाह्र वर्षपछि कमब्याक भएका हुन् । उनको पछिल्लो प्रस्तुति टिलपिल टिलपिल तारामा
८ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:५५	८ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:५५
टुँडिखेल जोगाउने अभियानमा गगनदेखि रवि लामिछानेसम्म (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, काठमाडौँमा ‘अकुपाइ टुँडिखेल’ अभियान सुरु भएको छ । शनिवार बिहान खुल्लामञ्चको चारै तर्फबाट मानवसाङ्लो बनाएर विरोधको अभियान सुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता ,कलाकार, स्थानीय नागरिक, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १२:०९	२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १२:०९
सय वर्षको उमेरमा पनि काव्य रचनामा तल्लीन । अचम्मकै कुरो हो यो । कतिले सपना पनि ठान्लान् । तर यो यथार्थ हो । र, सय वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय कवि हुन्– राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे । आजभन्दा १०० वर्षअघि
७ आश्विन २०७६, मंगलवार २०:०७	७ आश्विन २०७६, मंगलवार २०:०७